ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ကျွန်မအမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ကျွန်မအမြင်
Posted by manawphyulay on Aug 17, 2011 in Creative Writing, Jobs & Careers, My Dear Diary |7comments
မနော အတွေး မနော အရေး
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်ယှဉ်ပြီး ခေတ်မီတိုးတက်နေတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးခေတ်ကြီးလို့ တဖြည်းဖြည်းပြောလို့ရလာတဲ့ အနေအထား
ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်သော ခေတ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မျက်စိရှေ့မှာ စူပါမားကတ်ကြီးတွေ၊ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ ရှောပင်းမောတွေစတဲ့ တိုက်တာ အဆောက်အအုံကြီးတွေလည်း တိုးတက်များပြားလာနေသည် မဟုတ်ပါလား။ ဟော နောက်တစ်ချက်က မြို့ထဲ တိုက်ဟောင်းတွေဖြို၊ တိုက်သစ်တွေဆောက် ကြိုတင်လေလံဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချ၊ စီးပွားရေးသမားတွေက နေရာကောင်းကောင်း သူ့ထက်ငါ အလုအယက်ဝယ်ယူ၊ ဆိုင်ခန်းတွေဆောက်နဲ့ နေရာတိုင်းမှာလည်း အရောင်းစင်တာကြီးတွေ ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဒါတွေပဲလားဆိုတော့ ဆက်ကြည့်ပါဦး။ ရပ်ကွက်တွေမှာဆိုရင်လည်း လူနေတိုက်ခန်းမြေညီထပ်တွေ၊ အိမ်ရှေ့အဖီတွေဆိုရင်လည်း စတိုးဆိုင်တွေကနေပြီး အနည်းဆုံး
စုံစီနဖာဆိုင်ကလေးတွေ အဆုံး အစီအရီရောင်းနေကြတာလည်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ နောက်ပလက်ဖောင်းတွေ လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေမှာလည်း ဈေးဆိုင်၊ ပန်းခြံကားဂိတ်တွေမှာလည်း ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ပြည့်လို့။ ဒါကြောင့်ပြောတာ
ဒါတောင် လမ်းဘေးရောင်းတာနော် တိုက်မိလို့ပြန်ပြီး ကောက်ပေးတာတောင် ဈေးသည်က ရှစ်ခေါက်ချိုးရုပ်နဲ့ ထသတ်မလားမှတ်ရ။ အင်း
ဒါတောင် ခေါင်းရွက်နဲ့ လည်ပင်းဆွဲပြီး တိုက်ကြိုတိုက်ကြား၊ မီးရထား၊ သင်္ဘောပေါ်တွေမှာပါ ဈေးသည်တွေ ဘယ်လောက်တောင်ပေါများနေသလဲဆိုတာ ပြေးမကြည့်နဲ့တွေးကြည့်တာနဲ့တင် သိနိုင်တယ်။
ကျွန်မ ပြောချင်တာက အဲဒါ မဟုတ်သေးဘူး။ ခေတ်နဲ့အညီ ရောင်းသူရှိသလို ၀ယ်သူရှိတာလည်း မဆန်းပါဘူး။ အဲ အလုပ်ရုံရှိသလို အလုပ်ရှင်ဆိုတာလည်း ရှိနေပြန်တယ်။ ဒီတော့ အလုပ်ရှိရင် အလုပ်သမားဆိုတာကရော ဘယ်နားထားမလဲ။ နည်းပညာခေတ်ရောက်လာပြီလို့ ဆိုကြပေမယ့် အလုပ်သမားဆိုတဲ့ လူတန်းစားကိုတော့ မေ့လျော့နေတတ်ကြတာ နေရာတိုင်းမှာလို့ပဲ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ၀ယ်သူနဲ့
ရောင်းသူကြားမှာ ပေါင်းကူးပေးတာကတော့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ မရှိမဖြစ် စွမ်းအားတွေလို့ ပြောရင် ပိုမှန်နေမလား မသိဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းမှာ အလုပ်ရှင်နဲ့ စားသုံးသူတွေရှိနေသရွေ့ အလုပ်သမားဆိုတာလည်း ရှိနေဦးမှာမို့ အလုပ်သမားဥပဒေတွေ သတ်မှတ်ပြီး အလုပ်သမားတွေကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြတာ ရာစုနှစ်တွေပါ မနည်းတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ အဲသည်လို အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ကြားမှာတောင် အလုပ်ရှင်ဘက်က ၀ိသမလောဘတွေတက်ပြီး အလုပ်သမားအပေါ် မောက်မာအနိုင်အကျင့်တာတို့၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲပြီး လုပ်အား၊ အချိန် ညစ်ယူတာတို့နောက် အလုပ်ကနေ မလိုချင်တဲ့ အလုပ်သမားတွေကို တရားဝင်ထုတ်ရင် အလုပ်သမားဥပဒေအရ သုံးလစာပေးရမှာမြင်ပြီး အလိုလို
ထွက်သွားအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းအောင်၊ စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ တင်းကြပ်မှုတွေ လုပ်လာတာတို့ ဖြစ်လာကြတာတွေ၊ အလုပ်သမားကို ခိုင်းတာနဲ့ ပေးတာမညီမျှတို့ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်လာကြတာ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ မြင်တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ နောက်တစ်ချက် ဆိုးတာကတော့ အလုပ်သမား အချင်းချင်း တန်းတူမဆက်ဆံပဲ ကိုယ်ကြည်ရင်ကြည်သလို အမြင်တည့်ရင် တည့်သလို
စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်နေရင်လည်း အရေးမယူ၊ ဒီတိုင်းပစားပေးပြီး ကိုယ်အမြင်မကြည်လင်တဲ့သူဆို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုတွေကလည်း အလွန်မှ သေးသိမ်ညံ့ဖျင်းရာရောက်တယ်ဆိုတာ မတွေးမိကြသလို လူဖျင်း၊ လူပိန်းတွေသာလုပ်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ မသိနားမလည်းကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီ ဒုနဲ့ဒေး တောင်လိုရာလိုပုံလာနေကြပါကလား။
လူသတ္တ၀ါမှန်သမျှရဲ့ ရုပ်ကို နာမ်က ဦးဆောင်နေတာဆိုပြီး မြတ်ဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်လို့ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ စကားလိုပဲ စီးပွားရေးလောကက လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်း အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား သူ့စည်းကိုယ့်စည်း စောင့်ထိန်းပြီး သဟဇတဖြစ်အောင် မကျင့်ကြံနိုင်ကြရင်တော့ ပြဿနာဆိုတော့ ရှိနေဦးမှာ မလွဲပါဘူး။ အဲသည်လို သူ့စည်းကိုယ့်စည်း စောင့်ထိန်းကြရင်းက တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ယုံကြည်မှုရှိလာကြပြီဆိုရင်တော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားတဲ့အထိ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊
သံယောဇဉ်တွေ ကူးလူးဆက်နွယ်သွားကြမယ်လို့ ကျွန်မ မြင်မိပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းဟာ စီးပွားရေးလောကမှာ တစ်ရှိန်ထိုး အောင်မြင်ကြီးထွားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်မှာ အမှန်ပါပဲ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ယင်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများရဲ့ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကို တက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်မှုအပေါ်မှာ
တည်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းများဖို့ထက် အရည်အချင်းရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းနည်းနည်းနဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင် ဖန်တီးနိုင်ရပါမယ်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ခွန်နဲ့အားနဲ့ လုပ်ကိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးရမယ်။ သူတို့နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ပြောရမယ်၊ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ဆွေးနွေးရမယ်။ သူတို့ပြောချင်တာတွေ ပြောပါစေ။ နားထောင်ပေးပါ။ ဒီလို နားထောင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်မသိတာတွေ သိလာလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်က သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို သင် သိနေရမယ်။
ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကုမ္ပဏီကြီး အောင်မြင်တိုးတက်မှုရှိနေမည်မှာ မြေကြီးလက်ခက်မလွဲပါဘူး။
သည်တော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် နားလည်မှုတွေနဲ့ ကျီးဘုတ်ရိုသေ၊ ဘုတ်ကျီးရိုသေရှိနေကြသရွေ့။ ပဋိပက္ခဆိုတာ ရှိလာတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ။ အလုပ်သမားတွေကလည်း ကိုယ့်အလုပ်သဖွယ် လုပ်ငန်းတိုးတက် အောင်မြင်အောင် အတွေးအခေါ် အသစ်တွေနဲ့ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဈေးကွက်လည်ပတ်မှု ချောမွေ့လာတာနဲ့အမျှ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဆိုတာလည်း နောက်က ကပ်ပါလာမှာ မလွဲဘူး ထင်ပါတယ်။ အဲသည်လို အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတစ်သားတည်း ဖြစ်လာကြတာနဲ့အတူ စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ကလည်း အဆင်ပြေ ချောမွေ့လာကြမှာ ဖြစ်တာကြောင့် လောကပါလတရားတွေ ပြန့်နှံ့ပြီး ဈေးကွက်ပန်းခင်းကြီး အစဉ်ထာဝရ ရှင်သန်လှပနေမှာကတော့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်ကြီးလို့
ပြောစရာမလိုလောက်တော့ဘူးလို့ ကျွန်မ မြင်ယောင်နေမိပါတော့တယ်။
(မှတ်ချက်။	။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မြင်ကြည့်ခြင်း။)
ဒေါ်မနော ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ရင်း ဒီလောက်ရှည်အောင်ရိုက်ရသလား ……
theme က နဲနဲအံချော်နေတယ် ….။ ဆရာကြီးလုပ်တာတော့မဟုတ်ရပါဘူးနော ဆရာလေး လုပ်တာပါ။
ဥပုတ်နီးပြီလေ .. အဟဲ။
theme က အံချော်နေလဲ တိတော့ဝူး။ ရေးရင်းနဲ့ အာရုံထဲဝင်လာတာတွေ ရေးဖြစ်သွားတာ…
Yes, I agree it. This post is far from globalization. This is just the comments for solving way of socio-economic problem and vertical relationship.
ဥာဏ်မှီသလောက်ပြောရရင် အလုပ်သမားကောင်းဖို့ အလုပ်ရှင်မှာတာဝန်ရှိတယ်
အလုပ်သမားကတော့ အလုပ်အပေါ်ကောင်းရင် ကိုယ်တိုင်လည်းဘ၀အတွက် ကောင်းလာမှာပါပဲ
တစ်ကယ့် တစ်ကယ် တန်းကြ
အလုပ်သမား အလုပ်ရှင်ကြား မှာ
ခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေ ရယ်လို့ မရှိသေးတဲ့ အချိန်
ဒီမှာ များတာကတော့ အလုပ်ရှင် အမှားပဲပေါ့
အနည်းစု ကတော့ အလုပ်သမား အမှားပေါ့
ဒီလိုပဲ မြင်မိပါတယ် ဗျာ
သူဌေးဆိုတာ အဲလောက်မသိဘူးကွဲ့…။ တနေ့တနေ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲက ငွေစာရင်း ကြည့်ရတာနဲ့၊ စပွန်ဆာကောင်မလေးအတွက် အချိန်ပေးရတာနဲ့၊ အဘတွေနဲ့ ဂေါက်ရိုက်ရတာနဲ့ တနေ့တာ အချိန်ကုန်သွားရော…။